“လေဖြတ်နေတဲ့ “မောင်ဖြစ်သူကို အနှိပ်သည်လုပ်ပြီး ရှာကျွေးနေရတဲ့ အပျိုကြီး တစ်ဦးရဲ့ ကြေကွဲဖွယ် အိမ်ကလေး” – စွယ်စုံသုတ
“လေဖြတ်နေတဲ့ “မောင်ဖြစ်သူကို အနှိပ်သည်လုပ်ပြီး ရှာကျွေးနေရတဲ့ အပျိုကြီး တစ်ဦးရဲ့ ကြေကွဲဖွယ် အိမ်ကလေး”
” ဝိုင်းဝန်း ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးကြပါအုံးရှင့် ”
ပုသိမ်မြို့ အမှတ်(2) ရပ်ကွက် လယ်တီ4 လမ်းမှာ နေထိုင်သော ဒေါ်စန်းရီ အပျိုကြီးတွင် မောင်ဖြစ်သူ ဦးအုန်းသန်း(68)နှစ်သည် အကြောသေလေဖြတ်ရောဂါဖြင့် အိပ်ယာထဲတွင် စကားမပြောနိုင်ပဲရောဂါဝေဒနါခံစားနေရသည်မှာ 10 လကြာနေခဲ့ပြီ။ ဦးအုန်းသန်း၏ ဇနီးမှာလည်း နောက်အိမ်ထောင်ပြုသွားခဲ့ပါသည်။
သမီး (2 )ဦးမှာလည်း အပြည့်အဝစောင့်ရှောက်ကျွေးမွေးနိုင်ခြင်း မပြုနိုင်ပေ။ ဖခင်နှင့်လည်း အတူနေထိုင်ခြငိး မရှိပါ၍ အပျိုကြီး ဒေါ်စန်းရီအိမ်တွင် မောင်နှမနှစ်ယောက်နေထိုင်ကြရပါသည်။
အပျိုကြီးဒေါ်စန်းရီမှာလည်း အသက်အရွယ်ကြီးရင့်နေရတာက. တကြောင်း အကြောသေလေဖြတ်နေသော မောင်ကို တယောက်ထဲ ထားခဲ့ရမည်မှာ စိတ်မချသောကြောင့် ရပ်ကွက်အတွင်း အနင်းအနှိပ်ခေါ်ပါက. 1000 ကျပ်ဖြင့် ဝင်ငွေရှာရပါသည်။ ရသမျှ ငွေကြေးများဖြင့် မောင်ဖြစ်သူအား ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ပါသည။
ဦးအုန်းသန်း၏ ကျန်းမာရေးကောင်းစဉ်အခါကလုပ်ကိုင်ခဲ့သော အလုပ်ရှင်မှ လစဉ်ထောက်ပံ့ကြေးပေးခဲ့သော်လည်း ဆေးစရိတ်ဖြင့်သာ ကုန်ခဲ့ရပါသည်။ နေ့လည်စာကို တခါတရံ အပျိုကြီးဒေါ်စန်းရီ နှိပ်ပြီး ပြန်လာသည့်အချိန် နေ့လည်2နာရီခန့်မှသာ စားခဲ့ရသည့်နေ့ရက်များစွာ ရှိခဲ့ပါသည်။အပျိုကြီး ဒေါ်စန်းရီတိူ့ မောင်နှမ နှစ်ဦး နေထိူင်သည့်အိမ်လေးမှာလည်း ပြိုကျတော့မည့်အနေအထားလေးပါ။ အိမ်ပေါ်ကိုပင် တတ်ဖို့အတွက် အရမ်းခက်ခဲလွန်းလှပါသည်။
အပျိုကြီးဒေါ်စန်းရီမှာ တခါတရံ မျက်စိမှုန်မှုန်ဖြင့် ပြုတ်ကြခဲ့သည့် နေ့ရက်များစွာလည်း ရှိခဲ့ပါသည်။ ငွေကြေးပြည့်စုံ၍ ချမ်းသာသူအဖို့ 100. 200 အသုံးမဝင်ပေမယ့် ဆင်းရဲချို့တဲ့သူအတွက်ကတော့ 100. 200 သည် ဆေးဖိုး ထမင်းဖိုးဟင်းဖိုးလေးတော့ အရမ်းတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ တယောက်ကို 100 လှူပေးခဲ့ရင် ဆယ်ယောက်ဆိုရင် 1000 ဖြစ်ခဲ့သလို အပျိုကြီးဒေါ်စန်းရီအတွက် 1000 သည်သာလျှင် မောင်နှမနှစ်ယောက်အတွက် တန်ဖိုးရှိဆုံးပါ။
1000 ပေါင်း များစွာလှူခဲ့လျှင် အပျိုကြီးဒေါ်စန်းရီတို့ မောင်နှမအတွက် တန်းဖိုးအများဆုံးဖြစ်ခဲ့မှာပါ။ မိမိတို့ တတ်နိုင်သမျှလေးကို စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်နေသော အပျိုကြီးဒေါ်စန်းရီတို့ မောင်နှမနှစ်ယောက်လေးကို ဝိုင်းဝန်းကူညီစောင့်ရှောက်ပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ အပ်ပါတယ်ရှင်။လှူဒါန်းလိုပါသော အလှူရှင်များမှ 09451244535 ကို ဆက်သွယ်ပေးကြပါရှင်။ တဦးချင်းစီကို နာမည်စာရင်းဖြင့် လှူဒါန်းပေးပါ့မယ်ရှင့်🙏🙏🙏🙏🙏
“မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ဝယ်ယူဖို့ Serum Institute နဲ့ ဆွေးနွေးနေပြီ”
“ဇနီးဖြစ်သူက အွန်လိုင်းမှာ တွေ့တဲ့လူနဲ့လိုက်သွားလို့ ကလေးငယ်လေးနဲ့ ကျန်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသား”